४१ वर्षमा छोरा आएपछि आमाको चम्किलो चेहरा ! - falaichanews
४१ वर्षमा छोरा आएपछि आमाको चम्किलो चेहरा !
इलाम । ४१ वर्षदेखि भारतीय जेलमा बन्दी बनाइएका इलाम माई नगरपालिका– १० लुम्बकका दुर्गाप्रसाद तिम्सिना ६१ वर्षको उमेरमा घर फर्किएका छन ।
छोरा आइतबार घर फर्कँदै छ भन्ने खबर पाएकी आमा बाटो हेरेर बसिरहेकी थिइन् । अपराह्न साढे ३ बजे घरमास्तिर गाडी रोकियो । गाडीबाट झरेर छोरा घरतिर ओरालो झरे । पिँढीमा बसिरहेकी आमाको मुहारमा झन्झन् उज्यालो थपियो ।
आमालाई प्रत्यक्ष भेट्दा उनले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् । दुर्गाप्रसादलाई आमाको छेउमा ल्याएर राखियो । ‘यो त बिरामी छ कि क्या हो ?’ आमाले सही शंका गरिन् । तर, छोराको वास्तविक स्वास्थ्य अवस्थाबारे आमालाई जानकारी छैन ।
४१ वर्षसम्म अनाहकमा जेल बसेका दुर्गाप्रसादको ‘आइक्यु लेभल’ नौ वर्षका बालकको जस्तो छ भनेर डाक्टरले भनेका छन् । कोलकाताको उच्च अदालतले उनको मानसिक अवस्था ठीक नभएको भन्दै छाड्न आदेश दिएको थियो । त्यही आदेशअनुसार उनी शनिबार थुनामुक्त भएको पुरा खबर नयाँ पत्रिकामा छ ।